Wadahadalada u Dhaxeeya Dawlada Itobiya iyo Jabhadaha Wuxuu ka Mudan Yahay Dhinacyada Ixtiraam – Rasaasa News
Jun 19, 2010 Wadahadalada u Dhaxeeya Dawlada Itobiya iyo Jabhadaha Wuxuu ka Mudan Yahay Labada Dhinacba Ixtiraam.
Heeshiis macnihiisu waxaa weeye in kolka ugu horaysa uu yimaado is Ixtiraam ay ugu horayso in la joojiyo dacaayadaha iyo eraydii la isticmaali jiray xiligii colaada. Waa talaabada ugu horaysa ee ay qaadaan dhinacyada doonaya in ay heshiiyaan, kolkaasna waxaa raaca talaabooyinka xigga ee heshiis dhab ah.
Waxaa aynu wada ognahay in Jxsg, ay heshiis dhab ah la saxiixatay dawlada Itobiya ayna maanta ku sugan tahay gudaha dhulka Somalida Ogadeeniya iyada oo waliba bilowday shaqooyin ku saabsan ka qayb qaadashada horumarinta dalka.
Dhinaca kale waxaa iyana uu heshiis u bilowday Jabhada wadaniga xoraynta Ogadeeniya iyo dawlada Itobiya. Arintaas oo dadweynaha Somalida Ogadeeniya ay u arkaan horumar dhinaca nabada ah oo keeni doonta nabad galiyo buuxda oo ka dhalata dhulka Somalida Ogadeeniya, oo uu raaci doonto horumarka la tiigsanayey wakhtiga dheer.
Waxaadse moodaa in ayna wali fahmin saxaafada Ismaamulka Somalidu, siiba ka Internet-ku arimaha heshiiska ee dhex maray JXSG iyo dawlada iyo waliba kan u socda ONLF iyo dawlada. Waxayna wali qorayaan erayo aan munaasab u ahayn heshiisyada dhacay iyo kuwa socda labadaba. Waxayna qoraan erayadii la adeegsan jiray xiligii colaada oo ay ka mid yihiin Woyyane, dabaqoodhi, nabadiid iuo ubo.
Waxaan filayaa in maanta uu jiro uun wax qas wada oo rabitaanka ummada Somalida Ogadeeniya diidan Jwxo-shiil iyo afar la socota iyo in doqomo ah oo aan iyagu kala garanaynin wanaag iyo xume midna.
Waxaase dhibaato ah in qaar ka mid ah saxaafada Ismaamulka Somalida ayna u muuqanba wanaaga ay sameeyey Jabhaduhu, balse uu u muuqdo oo kaliya Jwxo-shiil oo maanta jilbaha ka yuurura. Arintaas waxaa loo arki karaa in qaar ka mid ah saxaafada Ismaamulka Somalidu, ayna jeclayn heshiiska ay dawladu la gashay Jabhadaha ayna ka fadilayaan Jwxo-shiil, Jabhadaha nabada.
Waxaa dhab in ay jiraan xubno galay dunuub khaas ah iyo mid guud oo ka mid ah kooxda Jwxo-shiil, waxaa kale oo iyana jira dad galay dunuub khaas ah ama guud oo jooga dhulka Somalida Ogadeeniya.
Dadkaas khaladka galay oo dhan waxaa daaweyn u ah heshiis nabadeed oo dalka yimaada iyo cafis guud oo ay hesho cid waliba laysna calool xaadho. Wixii shakhsiyan loo kala galayna waxaa mudan la helo qirasho iyo cafis lala yimaado.
Inta wali xumaha wadana in si wada jir ah looga horyimaado lagana takooro ummada Somalida Ogadeeniya gudo iyo dibadba.